25 Musharrax ayaa u tartamaya Madaxweyne - BBC Somali
25 Musharrax ayaa u tartamaya Madaxweyne
6 Sebtembar 2012
Image caption Afhayeenka Guddiga doorashada, Cismaan Libaax Ibraahim ayaa ku dhawaaqay
Guddiga doorashada madaxtinimada Soomaaliya ayaa ku dhawaaqay liiska dadka u tartamaya doorashada Madaxweynaha, kadib markii ay gabagabeeyeen qabashada araajida.
Guddigu waxa ay sheegeen in muddo hal saac ah ay ugu dareen xubnaha araajida soo celinayay.
Waxa ay sheegeen in ay si rasmi ah u soo buuxiyeen shuruudihii madaxtinimada Soomaaliya 25 xubnood, kuwaasi oo u tartami doona doorashada Madaxweynaha ee dhici doonta 10-ka bisha Sebtember. Magacyada xubnaha waxa ay kala yihiin:
1. Cabdiraxmaan Macalin Cabdullaahi Baadiyoow 2. Cabdiwaaxid Cilmi Cumar Goonjeex 3. Cadbullaahi Axmed Caddoow 4. Cabdi Wali Maxamed Cali Gaas 5. Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo 6. Axmed Ismaaciil Samatar 7. Xasan Shiikh Maxamuud 8. Shariif Shiikh Axmed 9. Yusuf Garaad Cumar 10. Cumar Salaad Cilmi 11. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi Xaashi 12. Bashiir Nuur Xasan 13. Xaaji Maxamed Ismaaciil Yaasiin 14. Cabdulqaadir Cosoble Cali 15. Cabdiraxmaan CabdiShakuur Warsame 16. Xuseen Khaliif Jaamac 17. Maxamed Axmed Saalax 18. Salaad Cali Jeelle 19. Ibraahim Cali Xuseen 20. Saciid Ciise Maxamuud 21. Cismaan Maxamed Gacal 22. Maxamed Cabdullaahi Oomaar 23. Maxamed Cabdiweli Shiikh Yusuf 24. Maslax Maxamed Siyaad Bare 25. Sakariye Xaaji Maxamuud Cabdi
Image caption Guddoomiyaha baarlamaanka, Maxamed Shiikh Cismaan Jawaari
Shuruudaha laga doonayay dadka u tartamaya xilka madaxtinimada ayaa kala ahaa:
Inuu Soomaali yahay.
Inuu caafimaad qabo.
Inuu afartan sano ka weyn yahay.
In xukun danbi maxkamadeed aanu lahayn.
In codsiga madaxtinimada uu soo gudbiyo.
Inuu ku soo lifaaqo 10 kun oo Dollar oo diiwaan gelin ah.
Inuu soo gudbiyo barnaamijkiisa siyaasadeed.
Inuu heysto warqadda aqoonsiga in uu Soomaali yahay ama baasaboor Soomaali ah.
In labaatan xildhibaan ay u soo saxiixaan in uu musharax yahay qofka tartamaya.
In halkii xildhibaan uu u saxiixi karo saddex murashax oo keliya.
Doorashada Madaxweynaha Soomaaliya ayaa lagu wadaa in la qabto 10 bishan Sebtember.